Kunengqondo, kancane kancane , lo ingxenye wemakethe aye la mavangeli. Phela, thina ngokuvamile baxhumane nomkhaya nabangane ngokusebenzisa Skype noma e-mail, futhi ngisho nozakwethu nozakwethu - ngisho ngakho ngaphezulu! Kodwa eqinisweni, makhulu amathemba ibhizinisi lapho. Futhi nje kumabhizinisi amancane. Uma ukunyathelisa izincwajana ezingu-amakhadi kunezinkulungwane zamakhophi abhalwe - kunalokho "ukukhiqiza ngokwedlulele", ukukhiqizwa kwanoma namakarada-oda angawodwana futhi amaqembu amancane ngokubaluleka kuthandwa.
Cabanga ngalokhu: ezishibhile imikhiqizo Thenga ukuphrinta, abaningi babempofu. Uma into azithengiswa - ngokwesibonelo, ukuphrinta ngifaka isidingo Christmas lidlule izikhathi ezimbalwa - kunzima isizini ezayo, uma kungekhona ukuthi akwenzeki ukuthengisa yonke edition. It ebangela ngamanani aphansi kakhulu, futhi ngezinye izikhathi ngisho ukuthengisa ngaphansi kwendleko. Kodwa ukukhiqizwa ngenalithi ka ngifaka iyachuma. Iyini imfihlo? Cishe indlela ngamunye. Esikhathini kakhulu "umphefumulo izidleke." Ngenxa cindezela amakhadi wakhe ukuba esikhundleni wokunyathelisa bengayi, ngoba izandla amakhadi craftswomen ukunikeza okwakhe kanye ehlukile.
Ake sizame ukubheka amathemba ibhizinisi ngakolunye uhlangothi. Ake sithi, amakhadi ukuphrinta - yilokhu kanye kubonakala kithi okhangayo lesi sikhundla esinemali. Futhi kungase ngempela kwaba njalo uma ungakwazi ukubona izimo eziningana. Okokuqala, ukukhiqizwa kwanoma amakhadi, wagqoka ukusakaza, manje vogue. ezithakazelisayo Okuningi ukusebenza oda angawodwana, lapho ukuthuthukiswa umklamo kanye nokuzikhethela materials - konke okukhethiwe yikhasimende ozimisele ukukhokhela. Yini izisusa zakhe izobanjelwa izikhathi eziningana imali ephezulu ku ngifaka? Okokuqala - isithunzi. Phela, counterparty (okungaba ezingaphezu kwekhulu), noma kokuba iklayenti ezingaba, ukuthola ngokwezifiso iposikhadi eposini, kuyothiwa okungenani wathinta. umuntu aqaphile nalandela umlando ukuba banake izinga okusezingeni eliphezulu, okwenza ukuyiprinta ngifaka futhi izinto engavamile kanye nomklamo eyingqayizivele. Unganakile, ukuthembeka okunjalo uzakwethu kuyoba okuningi ephakeme. Uma ngokucophelela kanjalo imininingwane, iziphi izincwadi umuntu ukuphrinta ngifaka - kusho kuye okufanele sidingidwe.
Eyesibili eqakathekileko: ubuqobelo kwezithombe kanye nomklamo. Ukuze wenze lokhu, yebo, kuwukuzibizela umculi okhokhelwayo, okuyinto ezikwazi ukuhlaba zingene umqondo wethu. Kunoma ikuphi ke akudingekile ukusebenzisa "utsheleke" izithombe noma izithombe. We khulula amapeni, futhi ukulahlekelwa okukhulu lwesikhundla inkampani kungase kukuphathe kabi. Imininingwane kufanele kuhlonishwe. Eqinisweni, abaculi abaningi ukwenza ngifaka ephrintiwe kanye nemisebenzi yakhe nje Amaholo eyengeziwe, kodwa futhi izikhangiso eziphumelelayo. Ngakho-ke, sizama ukuthola umculi, futhi ukuba avumelane naye ngalokho, ngalokho amalungelo ungasebenzisa imidwebo yakhe futhi imidwebo yamaphrojekthi wakho. Khona-ke kuba ukucacisa labo abangase babe abathengi, okuyinto kungenzeka amabhizinisi aphakathi nendawo kanye enkulu. Sinenkosi imali "trifle 'ezifana Kwanyatheliswa ukubingelela ikhadi, kodwa futhi, zingabantu kahle ukuthi lokhu kuyindlela kuhle ezishibhile ukuze nidonse ukunaka kanye nokuqinisa ubudlelwano amakhasimende nesibambisene nabo. Kungenye into lapho umlingani for the holiday uzothola i-imeyili bingelela nga iskripthi efanayo, aqondiswa izinkulungwane abanye abemukeli, futhi enye - Lapho livula imvilophi nokufunda izidingo isignesha nesiginesha ngesandla umthumeli.
Kuvele ingxenye ezibalulekile emakethe - wabenza imoto
Dmitry Sychev: Biography futhi ukuphila komuntu umdlali webhola lezinyawo lase